वुहान ल्याबबाट नै कोरोना फैलिएको दाबी, मानिसलाई संक्रमित गर्न ल्यावमा चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले गरेका थिए काम: अमेरिका
28 Sep 2021 | मंगलबार, १२ असोज, २०७८ | Edition : Nepal | UK | Australia
एजेन्सी । कोरोना भाइरस उत्पत्तिलाई लिएर चीन पुनः एकपटक निशानामा परेको छ । अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टीले सोमबार एक रिपोर्ट पेश गर्दै कोरोना भाइरस चीनको बुहानको ल्याबबाटै फैलिएको पार्टीको दाबी छ ।
अमेरिकाको खुफिया एजेन्सीले निष्कर्ष निकाल्दै चीनको ल्यावबाटै भाइरस फैलिएको दाबी गरेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो एक रिपोर्टमा पर्याप्त प्रमाण रहेको र वुहान इन्स्टीच्युट अफ भाइरोलोजीका वैज्ञानिक मानिसालाई संक्रमित गराउन भाइरसमा परिवर्तन ल्याउने काम गरिरहेका थिए ।
अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी सांसद र सदनमा विदेश मामिलाका कमिटीका प्रमुख माइक म्याकलले यो रिपोर्ट पेश गरेका हुन् । उनले अपिल गर्दै कोरोना उत्पत्तिबारे पत्ता लगाउन बहुदलिय जाँच हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कोरोनाका कारण हालसम्म विश्वभर ४४ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ ।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार खत्री पक्राउ
खोटाङ । नेपाल प्रहरीले बैंकिङ कसुरजन्य अपराधका फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ ।
पोखरीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका किशोरको शव फेला
दोलखा । दोलखाको बिगु गाउँपालिका–४ लादुकस्थित पोखरीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका किशोरको शव फेला परेको छ ।
हाइटीमा तय भएको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित
एजेन्सी । हाइटीमा आउँदो महिनामा हुन गइरेहको निर्वाचन र संवैधानिक जनमतसंग्रह अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । निर्वाचन प्रशासनका सदस्यहरुलाई सोमबार बर्खास्त गरेपछि निर्वाचन र जनमत सङ्ग्रह अनिश्चित
पाेखरामा मौसम खुलेसँगै हिमालहरुको मनमोहक दृश्यहरु
कास्की । पोखरामा मौसम खुलेसँगै हिमालहरुको दृश्य लोभलाग्दो देखिएको छ । पोखराबाट देखिने अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे , धौलागिरी, हिमचुली लगायतका हिमालका कारण पोखरा विश्व पर्यटन बजारमा प्रख्यात छ।
कतारकी राजकुमारी शेखाद्वारा मनास्लुको सफलतापूर्वक आरोहण
भोटेकोशी, त्रिशूली र कर्णाली नदी सफा गरिने
घरमा तुलसीको विरुवा रोप्दै हुनुहुन्छ, यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्
एजेन्सी । तुलसीको बिरुवा हिन्दु धर्ममा सम्मानित मानिन्छ। तुलसी बिरुवा वास्तु दोषहरुको नाशक मानिन्छ। वास्तु शास्त्रका अनुसार तुलसीको बिरुवाले घरमा सकारात्मक उर्जा उत्पादन गर्दछ र नकारात्मक उर्जा नष्ट गर्दछ। तुलसीको विरुवालाई दैनिक बिहान पानी दिएर, धेरै प्रकारका वास्तु दोषहरुलाई हटाइन्छ। तुलसी विष्णु पूजामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
गर्भवती हुनुहुन्छ ? नखानुहोस् यस्ता खानेकुरा
यस्ता खालका आलु खानुहुँदैन
यो देशका दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जेल सजाय
एजेन्सी । अल्जेरियाका पूर्व दुई प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले जेल सजायको फैसला सुनाएको छ । पूर्व राष्ट्रपति अब्डेलाजिज बौटेफ्लीकाको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री भएका दुई नेतालाई अदालतले सजाय तोकेको हो ।
आफ्नै पार्टीबाट अपमानित भएको बताएका क्याप्टेन अमरिंदर सिंह बिजेपी प्रवेश गर्ने तयारीमा !
उत्तर कोरियाका सुन्दर युवतीहरुको अजबगजबको चाहना !
विश्वको सबैभन्दा डरलाग्दो जंगल, जहाँ पुग्नेबित्तिकै मानिस हुन्छ गायब !